ဖုတ် (သရဲ) ဝင်ပူးခံရသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖုတ် (သရဲ) ဝင်ပူးခံရသူ
ဖုတ် (သရဲ) ဝင်ပူးခံရသူ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 14, 2012 in Creative Writing, Short Story | 36 comments
တစ်နေ့သ၌ ရွာ၏ နေညိုချိန် ထန်းတဲတစ်ခုတွင် လူတစ်စု ထန်းရည် သောက်နေကြလေသည်။ ထိုသူတို့အနက် ကိုလူကြီး ဆိုသူမှာ အပါအဝင် ဖြစ်လေသည်။ ကိုလူကြီးမှာ လွန်စွာ လူကောင် ကြီးမားသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် မည်သည်ကိုမျှ မကြောက်တတ်၊ မည်သူ့ကိုမျှ မကြောက်တတ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းတို့၏ ထန်းရည်ဝိုင်း အရှိန်ရလာချိန်တွင် လူပုလေး ဆိုသူက ကိုလူကြီး အား ဤသို့ စကားစလေသည်။
“ဘိုလူ ရေ … မင်းကိုတော့ တစ်ခုလောက် သတိပေးရဦးမယ်ကွ”
“ဘာများလဲ … ဘယ်ကောင်က ငါ့ကို မကျေနပ်လို့လည်း ပြောစမ်းပါဦး”
“ဘယ်ကောင်ကမှ မင်းကို မကျေနပ်လို့ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းကို သတိပေးချင်တယ်ဆိုတာက မင်းအမေ ဒေါ်စိန်ထွား ကို ပြောတာ”
“မင်းကလည်း အမေက အိပ်ယာထဲ လဲနေတာဖြင့် ကြာလှပြီ။ ဒီနေ့မဟုတ် နက်ဖြန် သေချင်သေမှာပါပဲကွာ …”
“ငါ ပြောချင်တာ အဲဒါ ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွ၊ မင်းအမေ ပုံစံက မရိုးဘူးလို့ ကြားရလို့ မင်းကို သတိပေးချင်တာ”
“ဘာမရိုးတာလဲ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောစမ်းပါ ငပုရာ …”
“အေး … မင်းအမေ ဖုတ်ဝင်နေတာလို့ ကြားတယ်”
“ငါ့အမေ ဖုတ်ဝင်နေတယ် … ဟုတ်စ”
“အေး… ရွာထဲက လူတွေကတော့ အဲဒီအတိုင်း ပြောနေကြတာပဲ၊ မင်းကလည်း အိမ်ကပ်တဲ့အကောင် မဟုတ်တော့ ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား၊ မင်းအိမ်က ကလေးတွေတောင်မှ မင်းအိမ်မှာ မရှိရင် မင်းအမေနား မကပ်ဘူးတဲ့ကွ”
ကိုလူကြီး၏ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်စိန်ထွား တရှောင်ရှောင် ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ခြောက်လခန့်ပင် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လေသည်။ ယင်းသို့ ဒေါ်စိန်ထွား တစ်ယောက် တရှောင်ရှောင် (နေမကောင်းသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ဖြစ်နေသော်လည်း အစား စားသည့်အခါတွင်မူ ကြောက်ခမန်းလိလိ စားသောက်တတ်ပါသည်။ နေမကောင်းသော အဘွားအို တစ်ယောက် စားသည့် အစာမှာ ကြောင်စာလောက်သာ ရှိသင့်သော်လည်း ယခုမူ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ယောက်က်ျားကြီး နှစ်ယောက်စားလောက်ကိုပင် ကုန်အောင် စားသောက်နိုင်ခြင်းသည် စင်စင် မရိုးဟု ဆိုနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။
တစ်ခါက ကိုလူကြီးမှာ အမဲသား ချက်ရာတွင် အမဲသားဟင်းအိုးအား မီးဖိုပေါ်တင်၍ ခတ္တေခဏ အိမ်အောက် ဆင်းသွားခဲ့သည်။ ဟင်းအိုး နူးလောက်သည့် အချိန်တွင် ကိုလူကြီး အမဲသားဟင်းအိုး သွားကြည့်သောအခါ ဟင်းအိုးမှာ တက်တက် ပြောင်စင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကိုလူကြီးမှာ ခွေးများ တက်၍ မွှေသွား၊ စားသွားသည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့လေသည်။ ကိုလူကြီးမှာ ၎င်း၏ အမေ အပေါ်တွင် အထင်မှားခြင်း မရှိခဲ့ပါချေ။
အထက်တွင် ကျွန်ုပ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး သကဲ့သို့ ကိုလူကြီး၏ အပေါင်းအသင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောဖန်များလာသောအခါတွင် ကိုလူကြီးမှာ စတင် စမ်းသပ်ပါတော့သည်။ တစ်နေ့တွင် ကိုလူကြီးမှာ ထမင်းဇလုံ အကြီးကြီးဖြင့် ထမင်းအပြည့်ထည့်၍ ၎င်း၏ အမေအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကျွေးခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဒေါ်စိန်ထွားမှာ အဘွားအို တစ်ယောက်နှင့်မျှ မလိုက်အောင် အဆိုပါ ထမင်းဇလုံအား ကုန်စင်အောင် စားသောက်သည့်အပြင် ဇလုံတွင် ကပ်နေသည့် ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်များကို လျှာဖြင့်ပင် လျှက်လိုက်သေး၏။ ဤသည်ကိုကြည့်၍ ကိုလူကြီးမှာ ၎င်း၏အမေ ဖုတ်ဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း၏အမေအား ဝင်ပူး၍ စားသောက်နေသော ဖုတ်ကောင်အား ကိုလူကြီးမှာ ဓားကျိန်း ကျိန်းထားလေတော့သည်။
ကိုလူကြီး၏အိမ်တွင် ကိုလူကြီး၏ ဇနီး ဆုံးသွားပြီးကတည်းက လူကြီးဆို၍ ကိုလူကြီး တစ်ယောက်သာ ရှိလေသည်။ ကိုလူကြီး၏ ကလေး ၃ ယောက်မှာလည်း အသက် ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်သာ ရှိလေသည်။ ဒေါ်စိန်ထွားအား ဝင်ပူးကပ်စားနေသူ ဖုတ်ကောင်သရဲမှာ အဆိုပါ ကလေး ၃ ယောက်အား ဒုက္ခ မပေး၍သာ တော်ရော့သည်ဟု ဆိုရတော့မည်။
ဒေါ်စိန်ထွားတွင် ပူးဝင်နေသော ဖုတ်ကောင်သရဲမှာ ကိုလူကြီး အိမ်တွင် ရှိခိုက်တွင် ကိုလူကြီးအား ကြောက်၍ ငြိမ်နေတတ်သော်လည်း ကိုလူကြီး အိမ်တွင် မရှိသည့် အချိန်တွင်မူ အိပ်ယာထက်မှ ထ၍ မွှေပါတော့သည်။ ဒေါ်စိန်ထွား အိပ်ယာထက်မှ ထသည်နှင့် အိမ်ရှိ ကလေးများမှာ အိမ်ပေါ်တွင် မနေတော့ဘဲ အိမ်အောက်သို့ ဆင်းကြပါတော့သည်။ ထိုအခါ ကလေးများအား ဒေါ်စိန်ထွားက “မြေးလေးတို့ရေ … ဘွားဘွားနား လာကြပါဦး” ဟူ၍ လှမ်းခေါ်တတ်၏။ ကလေးများက အိမ်အောက်မှနေ၍ ဒေါ်စိန်ထွားအား “ဘွားဘွားက ဘွားဘွားမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ မလာဘူး” ဟူ၍ ပြန်အော်ပြောတတ်လေသည်။ ယင်းသို့ ကလေးများက ပြန်အော်သည့်အခါ ဒေါ်စိန်ထွားက “မြေးလေးတို့ကလည်း ဟင်း … ဟင်း … ဟင်း” ဟူ၍ လှောင်ရီသံဖြင့် ပြန်ပြောတတ်လေ၏။
ကိုလူကြီးမှာ ၎င်း၏ အမေတွင် ဖုတ်ဝင်နေကြောင်း ကိုယ်တိုင် သိရှိပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ ဖုတ်ကောင်သရဲအား မောင်းထုတ်ရန် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို ကြံရပါတော့၏။ ကိုလူကြီး၏ အပေါင်းအသင်းများက ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံ အကျိုးအကြောင်း သွားရောက် လျှောက်ထားရန် ကိုလူကြီးအား တိုက်တွန်းကြသည့် အားလျော်စွာ ကိုလူကြီးတစ်ယောက် ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့သည်။
“ဟဲ့ … ထူးထူးဆန်းဆန်း မောင်လူကြီးက ဘယ်ကနေ ကျောင်းထဲ လှည့်လာတာတုန်းကွယ့်”
“ဒီလိုပါ ဘုရား … တပည့်တော် အမေ ဖုတ်ဝင်နေလို့ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာတော်ထံ လာရောက်လျှောက်ထားတာပါ ဘုရား”
“စိန်ထွားကို ဖုတ်ဝင်ပူးနေလို့ … ဟုတ်လား”
“မှန်ပါ … တစ်နေ့က တပည့်တော် အမေ့ကို ဇလုံထဲ ထမင်းတွေ အများကြီးထည့်ပြီး ကျွေးကြည့်တာ ကုန်တယ်ဘုရား၊ လျှာနဲ့တောင် လျှက်လိုက်သေးတယ် ဘုရား … ”
“အိမ်း … တော်တော်ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ဖုတ်ကောင်ပါလား …။ မင်းအိမ်က အစားအသောက်တွေ များနေလို့သာ တော်ရော့တယ်။ နို့မဟုတ်ရင် မင်းကလေးတွေတောင် စားပစ်နိုင်လောက်တယ် မောင်လူကြီး”
“မှန်ပါ့ ဘုရား၊ တပည့်တော်ကလည်း အိမ်ကပ်တဲ့အကောင် မဟုတ်တော့ ကလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်ရပါတယ် ဘုရား”
“အောင်မာ … မင်းက အခုမှ လာစိုးရိမ်နေရသလား … မောင်လူကြီးရဲ့ …”
“အရင်က သူများတွေပြောတာ တပည့်တော် မယုံခဲ့ပါဘူး ဘုရား၊ အခုမှ ကိုယ်တိုင် သိတော့မှ စိုးရိမ်မိတာပါ ဘုရား”
“အေးကွာ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွယ်၊ မနက်ဖြန် မနက်ကျရင် ငါ လာခဲ့မယ်၊ အိမ်ကစောင့်နေ ကြားလား မောင်လူကြီး”
“မှန်ပါ့ ဘုရား၊ တပည့်တော် ပြန်ပါဦးမယ် ဘုရား”
နောက်တစ်နေ့ မိုးသောက် မနက်ခင်း ရောက်သောအခါတွင် ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်မှာ ဦးဇင်းတစ်ပါးနှင့်အတူ ကိုလူကြီး၏ အိမ်သို့ ကြွလာခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော် အိမ်ပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ ဒေါ်စိန်ထွားမှာ မျက်ထောင့်နီကြီးဖြင့် ဆရာတော်အား စူးစူးကြည့်၍ “ဟေ့ … ဘယ်က ကတုံးက ငါ့အိမ်ပေါ် ရောက်လာတာတုံး၊ သွား … အခုချက်ချင်း ဆင်းသွား” ဟူ၍ အော်ဟစ် ပြောဆိုပါတော့သည်။ ထိုအခါ ကိုလူကြီးမှာ အိမ်ထရံတွင် ထိုးထားသော ဓားအား ဆွဲယူလိုက်ပြီး “ခွေးမသား ဖုတ်ကောင် …၊ ဓားနဲ့ ပိုင်းလိုက်လို့ အမျိုးပါ ပြုတ်သွားမယ်၊ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း” ဟူ၍ ပြောဆိုလိုက်လေသည်။
“နေပါစေ မောင်လူကြီးရယ် …။ အဲဒီကောင်ကို ဓားဆွဲစရာ မလိုပါဘူး၊ ထားလိုက်စမ်းပါ” ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားလိုက်သည့် အခါတွင် ကိုလူကြီးမှာ ပြန်၍ ငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ ကိုလူကြီး ငြိမ်သွားသည်နှင့် ဖုတ်ကောင် ဝင်ပူးနေသော ဒေါ်စိန်ထွားမှာ အိမ်ယာထက်က ဆင်းရုံတင်မက ဆရာတော် ရှေ့တွင်ပါ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခါးထောက်လျက် “ဒီကတုံးက ဘာမို့တုန်း၊ သေသွားချင်လို့လား … ဟင်း … ဟင်း .. ဟင်း၊ အခုချက်ချင်း ငါ့အိမ်ပေါ်က ဆင်း” ဟူ၍ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်အား ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း မောင်းထုတ်ပါတော့သည်။ ထိုအခါ ဆရာတော်မှာ မိမိရှေ့တွင် ရောက်နေသော ဖုတ်ကောင် ဒေါ်စိန်ထွားအား အနီးတွင် ရှိသော ရေခွက်ဖြင့် ဖြန်းခနဲ ပက်လိုက်လေ၏။
“အမလေး … ပူတယ် … ပူတယ် … အား ” ဟု မည်တမ်းကာ ဖုတ်ကောင် ဒေါ်စိန်ထွား မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ် လှိမ့်နေရပါတော့သည်။ ဆရာတော်က အနီးမှ ဦးဇင်းအား အသင့်ပါလာသော ပရိတ်ကြိုးဖြင့် ချည်ထားရန် စေခိုင်းလေသည်။ ပရိတ်ကြိုး ချည်ပြီးသောအခါ ဖုတ်ကောင်မှာ “ကြောက်ပါပြီ ၊ အမလေး … အမလေး .. ပူတယ် .. ပူတယ် .. ကြောက်ပါပြီ ဘုရား ” ဟူ၍ အော်ဟစ်နေပါတော့သည်။ ထိုအခါ ဆရာတော်မှ ဒေါ်စိန်ထွားတွင် ပူးဝင်နေသော ဖုတ်ကောင် သရဲအား …
“ ဟေ့ နင်က ကျူးကျူးကျော်ကျော် ရွာထဲလာပြီး ပူးကပ် စားသောက်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား … ။ ”
“ ငတ်လွန်းလို့ ပူးကပ် စားမိတာပါ … ခွင့်လွတ်ပါ၊ ခွင့်လွတ်ပါ … ”
“အေး … ဒီတစ်ခါတော့ ခွင့်လွတ်လိုက်မယ် … နောက်တစ်ခါ ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ကြားလား ..”
“ဟုတ်ပါပြီ … ဟုတ်ပါပြီ … လွတ်ပါတော့ … လွတ်ပါတော့ … နောက်တစ်ခါ မလုပ်တော့ပါဘူး ..”
“အေး … အေး … နင်တို့ ဘဝနဲ့ ငါတို့ ဘဝက ခြားနေတယ် … ကြားလား … နောက်တစ်ခါ အဲဒီလို မှီခိုမစားနဲ့ … ဦးဇင်းလေး ပရိတ်ကြိုး ဖြည်ပေးလိုက်ပါတော့ ..”
ပရိတ်ကြိုး ဖြည်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဒေါ်စိန်ထွားမှာ လွန်စွာ ရွံရှာ၊ စပ်ဆုပ်ဖွယ် ကောင်းသော အလောင်းကောင် အဖြစ်သို့ ရုပ်ချည်း ပြောင်းလဲ သွားလေတော့သည်။ ဤနေရာတွင် ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်၏ အကြောင်းကို ကျွန်ုပ် ရေးသားခဲ့သော “သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း” ပို့စ်တွင် အနည်းငယ် ဖော်ပြ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းနေ့ ယင်းအချိန်တွင်ပင် ကိုလူကြီးမှာ ၎င်း၏မိခင် အလောင်းကို ရွာအပြင် သချိုင်းတွင် သွားရောက်မြှုပ်နှံခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ တွင်မူ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်နှင့်တကွ သံဃာ (၅) ပါးအား ဆွမ်းကပ်ကာ မိခင် ဒေါ်စိန်ထွားအတွက် အမျှအတမ်း ပေးဝေခဲ့ပါတော့သတည်း …… ။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ် (၂၀) ကျော်ခန့်က စာရေးသူ၏ ဇာတိရပ်ရွာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော တကယ့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါကြောင်း ….. ။
ဖုတ်ပူး တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ အခုမှ သိရတော့တယ် ။ ကျေးကျေးဘာဗျာ
အခုလို လာရောက် မန့်သွားတဲ့အတွက် ကျေးကျေးဘာ ကိုပေရေ … ။
ဒေါ်စိန်ထွားလို ဒ်ါစိန်ပေါက်လဲ ဖုတ်ပူးချင်လိုက်ပါဘိ..ကွိ..ကွိ..
နောက်ထပ် ဖုတ် အကြောင်းလေးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး.
ဖြစ်နိုင်ရင် ဖုတ်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းဆိုပြီး သိသမျှရေးပေးပါဦး
အမရေ .. ဖုတ် တစ်ကောင်လောက် ပါဆယ်ပို့ပေးပါ့မယ် …
အစားအသောက်တွေ ပျက်နေတယ် ဆိုလို့ …
တကယ်ရောက်လာတော့မှ ထွက်ပြေးရဘူးနော် …
အနော်သိသမျှ ဖုတ် အကြောင်းတွေကိုလည်း
ရေးပါ့မယ် ဒေါ်စိန်ထွား … အဲ … ယောင်လို့ .. ဒေါ်စိန်ပေါက် ရယ် …
ဖုတ်မရှိလို့ ဖြစ်ရမယ်.. ဖုတ်လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်
ဖုတ်တွေ့ ရင် ပြောပါနော်..
(ရတယ် ဘာ ဖုတ် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ )
ဖုတ်ပူးကပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်မလည်း တစ်စွန်းတစ်စ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
အရင်က အိမ်နားက ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် လေဖြတ်ရင်း … အိပ်ရာထဲ လဲသွားရာက နောက်ပိုင်း သန်သန်မာမာပြန်ဖြစ်လာပြီး ၀၀ဖြိုးဖြိုးဖြစ်လာတယ် .. ထူးခြားတာက ညဘက်မှသာ လူကောင်းလို လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီး နေ့ခင်းဘက်ဆို အိပ်ယာထဲမှာပဲ ..ပျော့ခွေနေတယ် …. ။ ထမင်း ဟင်းတွေလည်း ညဘက် ခိုးစားတယ် … ။ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့လည်း ကြည့်တယ် … ။
အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကတော့ ဖုတ်ကောင်မှန်းသိလျှက်နဲ့သူတို့ ဆွေမျိုးသားချင်းအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားပြီး .. သူ့ကိုကျွေးခဲ့တယ် … ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ …ဘေးအိမ်တွေ ပြောလွန်းတာကြောင့်ရယ် ၊ အိမ်နီးနားချင်း ကလေးတွေ ငိုတာ မတိတ်တော့တာကြောင့်ရယ် … သူ့ကို ပရိတ်ရွတ်ထုတ်လိုက်မှ … ဖုတ်ပြန်ထွက်သွားတယ် … ။ ကိုအံစာတုံးပြောသလိုပါပဲ … ဖုတ်ကောင်ထွက်သွားတာနဲ့ … အဲ့ဒီအလောင်းကြီး ချက်ချင်း ပုပ်သိုးသွားတယ် … ။
ဖုတ်ကောင်က လူသေတဲ့အချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက်ဝင်ပြီး … ကိုယ်ခန္ဓာ အစား ထိုး ၀င်ရောက်နေလို့ပါပဲ … ။
ဖုတ်ဝင်တဲ့ အကြောင်းတော့ ဟိုလူပြောဒီလူပြောနဲ့ ကြားဖူးနေတာကြာပြီ
ကိုယ်တိုင်တော့ မတွေ့ဖူးသေးဘူး .စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်
နောက်ထပ်လည်း ဒိလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင် တင်ပေးပါဦး ………
ဟုတ်ကဲ့ပါ နွယ်ပင်ရေ …
ကျုပ်ကြားဖူးတဲ့ ဖုတ်ပူးတဲ့ သရဲပူးတဲ့ အကြောင်းတွေကို နောက်ထပ်လည်း တင်ပေးပါဦးမယ် ခင်ဗျ … ။
ကျေးကျေးပါ … ။
ငယ်ငယ်က အဲလိုအဖြစ်တွေကိုကြားဖူး ကြုံဖူးပါတယ် ကလေးဘ၀ဆိုတော့လည်း သေချာသွားမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး..ဘာပဲပြောပြောအခုချိန်ထိတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ် သရဲအကြောင်းတွေဆို….
ဘုန်းကြီးနဲ့သားနဲ့ပေါင်းပြီး..အမေကိုသတ်တာပဲလို့.. တွေးမိတယ်..။ :?
အခုလည်း ကျောက်ခဲအန်တဲ့ အခွေထွက်နေတယ်လေ …. ။ Fake လားဘာလားသိဖို့တော့ … အချိန်ယူပြီး ကြည့်ပြီးမှ ဝေဖန်လို့ရမယ် … ။
မာမို့ရှေးဆင်ဆိုပြီ လိမ်တဲ့ဗီဒီယိုတောင် မနေ့တနေ့ကမှ.. အဖြစ်မှန်ပေါ်လို့တဲ့..
မူရင်းဗီဒီယိုဖြတ်ကလေး.. ပိုင်ရှင်လည်း ဒေါကန်နေလေရဲ့..
( ပို့စ်တင်သူကို.. အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော..။ သိတာတွေ..ရေးသာရေး..အားပေးပါတယ်..။
အခုက..အချက်အလက်ကို လိုက်ထောက်ပြနေတာပါ… ပြန်လှန်ပြောစေလိုကြောင်း… )
Huffington Post – 10 hours ago
Woolly mammoths — large, hairy prehistoric elephant-like relatives — supposedly have been extinct for thousands of years.
Video: RE Woolly Mammoth found Alive Crossingariver in Siberia.wmv
Awesome or Off-Putting: Don’t Worry, A Wooly Mammoth Survived …‎ hecklerspray
Woolly mammoth caught on video in Siberia?‎ Alaska Dispatch..
Despite any compensation he may see, Petho is still upset that Cohen or anyone else could so easily put his own copyright name onavideo. “If the general public wants to seeabunch of hoaxes made up, then let it be included in something likeahoax-of-the-week, and have fun with it.
“But to try and sell it off and makeaprofit out of it, that’s not right.”
Petho said he’s met people who love to con the public and manipulate and get people to believe something that’s not true. “I don’t understand why, and it’s just beyond my thinking. People should stand up to this kind of abuse on the Internet.”
သဂျီး ခင်ဗျာ ..
ကျုပ်ကလည်း သဂျီး ပြောတာကို အပြစ် မမြင်ပါဘူးဗျာ။
လူတိုင်း ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်ပဲ မဟုတ်လား။ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါနဲ့ သဂျီးရေ ဒီနေ့ ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ရှေးဆင် ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုကတော့ အတုကြီးပေါ့ … ။ အဟိ .. ထင်တော့ ထင်သားပဲ။ အတုကြီးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။ ကျေးဇူးပါ သဂျီး ခင်ဗျာ။
ညီမရေ အမ အဲဒီ အခွေ ကြည့်ပြီးပြီ.. ကျောက်စလစ်ခဲတွေ အန်ထုတ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ.. အဲဒီ ဆရာတွေ လေပေါတဲ့ အခန်းတွေ များနေလို့ ရစ်ရစ်ပြီး ကြည့်ရတယ်။
ဟုတ်တာ မဟုတ်တာထက်.. အဲဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ လူတွေကိုတော့ အမြင်ကတ်မိတယ်။
ဖုတ်တွေက အမဲသားဆို အရမ်းကြိုက်တာဆို
နာ့ကပ်ဘူးတဲ့ ဖုတ်က နင့်ခေါင်းက ဆံပင်မွှေးထက်တော့များတယ်။
ရှူချင်ရင်ပြောလေ အဘထ ရှူဆေးရှိတယ်
အမထ ရှူဆေးကော ရှိပါသလား ခင်ဗျ
ဥပမာ ဆိုရင် ရင်
ကိုကိုကြောင့် ကို သာ ကြည့်
ဖရဲနဲ့ ကိုပေါက်ဖော်တို့ကတော့ ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် အပြန်အလှန်ကို တွယ်နေကြတာပဲ …
ခင်ဗျားတို့ ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ပြီး ကျုပ်တော့ ရီမိတော့တာပဲ ….
ဖုတ်ဘုရင်ဆိုတော့ တော်တော်ကို ဝါရင့်မယ့် အကောင်ပဲ ဖြစ်ရမယ်ဗျ။
ရေးပါဦးဗျို့ … နော့ …
အိမ်သာ နဲ့ အီးပေ လိုင်းကနေ ဖုတ် လိုင်း ပြောင်းပြီး သဂျီး ကို ဆန့်ကျင်ကြရအောင်.. သရဲ အကြောင်းတွေလည်း တော်တော် ခေတ်ထ နေတာ.. နီးစပ်တယ်နော်။
ရှိသမျှ ကြားဖူးသမျှ ဇတ်လမ်းတွေ ဖော်ထုတ်ရေးကြ။ ဟိဟိ
ကျွန်တော့်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်……. ဒါဟာ လဲသူများစီကတဆင့်သိရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ခဲ့ရတာပါ…….. မမြင်အပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ပူးပြီး စကားပြောတာမျိုးပါ…. စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဖြင့် ကာယကံ ရှင်များရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး အမည်အားလုံးလွှဲပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်……. ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံလိုက်ပါဦးမယ်………….. အားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့်
ရေးကြပါ .. သရဲအကြောင်းတွေ …
သရဲမယုံတဲ့ ဒို့သဂျီးရဲ့ အယူအဆကို ဝိုင်းဝန်း ဆော်ပလော်တီးကြပါကုန်စို့ .. ဟီဟိ
အစားအရမ်းစားတာကို သားသမီးတွေက ဖုတ်ဝင်နေပါတယ်ဆိုပြီး
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်မိဘရင်းတွေ အပေါ်ကိုတောင်
မဟုတ်တာတွေကို သံသယ ၀င်မိလို့မသေသင့်ဘဲ သေရတာတွေလဲ
ှဖုတ် ၀င် တာ တော့မမြင် ဖူး ဘူး ။ သရဲဝင် ပူး ထား တာ တော့ ကိုယ် တိုင် မြင် ဖူး တယ်။ အ မ ကို ၀င်ပူး တာ ပါ။ ရွှေ ရင် ကျော် ဆရာ တစ် ယောက် က ကု ပေး တာ ။ ဆ ရာ က နင် ဘယ် သူ လဲ လို. မေး တော့ သူ့ နာ မည် ကို ပြော တယ်. ဘယ် လို သေ တာ လဲ မေး တော့ ရ ထား တိုက် လို့ သေ တာ လို. ဖြေ တယ်. ဘာ လို. ဒုတ် ခ ပေး တာ လဲ လို့ မေး တော့ နေ စ ရာ မရှိ လို. ပြန် ဖြေ တယ်.အဲ ဒီ ဆရာ က တခြား သွား နေ။ဒီ မှာ နေ လို့ မရ ဘူ လို. ပြော တော့သရဲ မက ပြေပြေ လည် လည် နဲ. ဟုတ် ကဲ. တခြား သွားနေ မယ် တဲ.။လိုက် ပို. ပေး တဲ.။ အဲ ဒါနဲ. ဆရာ က နင် ဘယ် သွား ချင် လဲ လို. မေး တော. ရွှေ ကူ မြို. ကို သွား မယ် တဲ.။အေးပို့ ပေး မယ် ဆို ပြီး အဲးဒီ ဆရာ က ဆိုင် ရာ နတ် တွေ ကို ပင့် ပြီး နင် သူ တို. နဲ့လိုက် သွား လို. ပြောတော့ ကျေး ဇူး ပါ တဲ့. မသွားခင် ဘာ ပြော ချင် သေးလို့မေး တော. သရဲ မ က ဗိုက် ဆာ တယိ တဲ.။ ဆရာ က ကျွန် တော. အ ဖေ ကို ဘာ စား စ ရာ ရှိ လဲ ကျွေး လိုက် ပါ ဆို တော့ အဲ ဒါ နဲ့အ ဖေ က တစ် ယောက် ကို မီး ဖို ထဲ က တမင်း နဲ ၀က် သား တွေ ဇတီး ဇလုံ ကြီး အ ပြည့် သွား ယူ ခိုင်း ပြီး ချ ကျွေး လိုက် တာ သ ရဲ မ က အ ကုန် ဆွဲ သွားတယ် ဗျာ။လက် နဲ.ယူ ပြီး စား တာ မ ဟုတ် ဘူး နော် .ဇ လုံ ထဲ ခေါင်း ထည့် ပြီး ဆွဲ တာ။ဆန် ၂ လုံး ချက် လောက် ရှိ မယ် .ပြိုက် က နဲ ဘဲ။ဘေး က လူ တွေ တောင် လန့် တယ်။ တ ကယ် တမ်း အ မ က အ စား တော် တော် နည်း ပါ တယ်။ ကျွန် တော် တို. လဲ ဒါ မျိုး တွေ သိပ် ယုံ တာ မဟုတ် ဘူး ။ အ ခု က ကိုယ် မျက် စိ ရှေ့ ကြီး ဆို တော့ ဘယ် လို ပြော ရ မှန်း တောင် မသိ တော့ဘူး။ စားြ့ပီး တော့ အိမ်တံ ခါး ပေါက် ၀ ဘက် လှည်. ပြီးမြင်း တွေ နဲ. ကျွန် မ ကို လာ ခေါ် ပြီ ပြော ပြီး တာ နဲ. တ ပြိုင် နက် ကျတော့ အမ ငုတ် တုတ် က နေ အ ရုပ် ကြိုး ပြတ် လဲ ကျ သွား တာ ပဲ..နှာ နပ် ပြီး သ တိ ရ လာ တော. အာ လုံး က ၀ိုင်း မေး တော သူဘာ မှ မ သိ ဘူး တဲ.။ လွန် ခဲ့ တဲ့ ဆယိ့ ခု နှစ် လောက် က တကယ် ကြုံ ခဲ့တာ ပါ.
ယုံ ရ ခက် ခက် ကြီး ။ တ ကယ် ကြုံ ခဲ့ တာ ဆို တော. ဘယ် လို ပြော ရ မလဲ မယုံ ဘူး လို့ ပြော ရ အောင် လဲံ နှုတ် က မရဲ ဘူး။
အံဇာတုံးက ကိုယ်တွေ့ဆိုတော့ မှန်ချင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ရောဂါတွေက ထူးဆန်းပါတယ်။
ဥပမာ Cirrhosis ခေါ်တဲ့ အသည်းခြောက်ရောဂါ ရင့်လာတဲ့လူတစ်ချို့မှာ နေ့နဲ့ည လွဲတာတွေတွေ့ရပါတယ်။
နေ့မှာအိပ် ညကျမှ ထပြီး ထမင်းတွေ မုန့်တွေရှာဖွေစားတော့ ဖုတ်ဝင်တယ်ထင်ကြပါလေရော။
ကျွန်မ အဖွားလေးတုံးက ကိုယ်တွေ့ပါ။တစ်နေ့လုံးအိပ် ညဆိုရင် ဗိုက်ဆာတယ် ဗိုက်ဆာတယ် ဘာစားဖို့ရှိလဲဆိုပြီး ထစားတော့တာပဲ။စားရင်လည်း လူမမာစားနေကျ မက ကုန်ပါတယ်။
ပြုစုရတဲ့ အတူနေ ညီမက ကြောက်ပြီး တိုင်ပင်တော့မှ ရှင်းပြရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ အခြားအသိတစ်ယောက်ရဲ့အဖေ အသည်းခြောက်ဝေဒနာသည်လည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်တော့ ၂ဦးလုံးကို တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ကို ပြောပြအားပေးခဲ့ရပါတယ်။
သားသမီးတွေ အယူမှားပြီး မိဘသတ်တဲ့ကံတွေ မထိုက်ကြစေချင်ပါဘူး။
တီတီ padonmar ပြောတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲဗျနော့ ….. အဲလို ဖုတ်ဝင် တာလား ရောဂါ ဖြစ်တာလား မသိတဲ့ (သိအောင်လဲ မဆန်းစစ် နိုင်ခဲ့တဲ့) အဖြစ်အပျက် မျိုး ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးတယ်ဗျို့  …
အခုမှ ဒီ post ကို ဖတ်မိတာဗျ။
ကျုပ်လည်း ကြုံဘူးတယ်။ နောက်တော့မှပ` ဖောက်သည်ချတော့မယ်ဗျို့။
မအားသေးလို့ sorry နော်…
ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတာ အရင် ကကြားဖူးတယ်အဘိုး အဘွားတွေက
တကယ်ပြောကြတာ မယုံဘူး လို့ ပြောချင်သူတွေပြောပါစေ
အာဖရိကမှာ ဗူးဒူးမော်ပညာရှိတယ် လူသတ်တယ်
သရဲ တစ္ဆေ တွေ နာနာဘာဝ-တွေ ရှိတာပဲ ဘာသာက ပြထားတာပဲ
တခြားဘာသာတွေမှာလည်း ရှိတယ် အစ္စလာမ်မှာလည်းရှိတယ်
ဟုတ်၏။နာနာဘာဝတွေကိုလဲ မယုံလို့ မဖြစ်ဘူးဗျို့ ။သူတို့ မှာလဲ မွေးဖွားခြင်း၊သေဆုံးခြင်းရှိတယ်ဆိုဘဲဗျ။
အမလေးဗျာ ကိုအံစာတုံးရေ တကယ့်ဖြစ်ပျက်မို့ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါနော့။